के तपाईं चाट्नुहुन्छ? चाट्दा के हुन्छ?… (हेर्नुहोस भिडियो) – Sanjal Nepal
Homeभिडियोके तपाईं चाट्नुहुन्छ? चाट्दा के हुन्छ?… (हेर्नुहोस भिडियो)
April 26, 2021 admin भिडियो 895
लामो समयको गहिरो प्रेमपछि देवको विवाहको प्रस्ताव अनुजाले नकार्न सकिनन्। हिँडदा, उठ्दा, बस्दा उनलाई देवकै याद आउँथ्यो। त्यसमा पनि मिलेको जिउडाल, कपालको स्टाइलले अनुजानको मन देवतिर तानिकएको थियो। देवले बारम्बार अनुजासँग बिहेको प्रस्ताव गरिरहे। ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल ?क्लिक गर्नुहोला
देवले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा डेरा गरेर बस्दै आएको घरमा अनुजालाई भित्र्याए। तर बिहे गरी ल्याएको पहिलो रात मात्र अनुजाले थाहा पाइन् देव त देविका रहेछिन्। अर्थात् देव केटा नभएर केटी भएको उनले थाहा पाइन्। ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल ?क्लिक गर्नुहोला
अर्को श्रीमतीलाई भुडी बोकाएपछी भयो लफडा
December 31, 2020 admin भिडियो 3412
श्रीमतिहरु अर्कैको श्रीमानसंग किन नजिक हुन्छन त जब आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अरु कै श्रीमान संग सल्किने गरेको देख्न पाइन्छ बिसेषगरि पछिल्लो समय श्रीमान हरु विदेशमा भएका श्रीमतिहरु अरु पुरुषहरुसंग सल्किएको देख्न र सुन्न पाइन्छ सबैलाइ
November 29, 2020 admin भिडियो 1803
December 1, 2020 admin भिडियो 3515
भिडियो समाचारको अन्तिममा राखिएको छ पुरा समाचार हेर्नुहोस काठमाडौं। आफैंलाई जन्माउने आ’मासँग यौ’नमा लि’प्त भएका बेला आफ्ना श्री’मानलाई रं’गेहात प’क्राउ गर्ने श्री’मतीले आफ्ना श्री’मान र सासूबीच अ’नैतिक स’म्बन्ध रहेको पहिलेदेखि नै शं’का लागेको बताएकी छिन्